Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 1t l0313 lah
Lesona 03 : Vita ny famoronana
12 - 18 Jan 2013
Famoronana : Masoandro sy ny volana ary ny kintana
Alahady 13 Jan
Vakio ny Gen. 1:14-19. Inona ireo asa voalaza fa natao tamin'ny andro fahefatra amin'ny famoronana? Ahoana no ahazoantsika ny hevitr'izany, indrindra indrindra eo anatrehan'ny fahafantarantsika ny tontolo iainantsika ankehitriny?
Ny andro fahefatra amin'ny famoronana angamba no nisy resaka be momba azy mihoatra noho ireo andro enina hafa. Raha tamin'ny andro fahefatra no noforonina ny masoandro, inona izany no namaritra ny tsingerin'ny andro tamin'ireo andro telo voalohany amin'ny famoronana? Etsy an-danin'izany, raha efa nisy indray ny masoandro, inona izany no nitranga tamin'ny andro fahefatra?
Ny fisalasalana mikasika ireo zava-nitranga tamin'ny andro fahefatra amin'ny famoronana dia tsy mipoitra avy amin'ny fifanoheran-javatra araka ny lojika, fa avy amin'ny hamaroan'ny zavatra azo eritreretina fa nitranga. Zavatra anankiray azo eritreretina fa nitranga ny hoe tamin'ny andro fahefatra no noforonina ny masoandro, ka ny hazavana tamin'ireo andro telo voalohany, tamin'izay fotoana izay, dia avy tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra, na avy tamin'ny loharanom-pahazavana hafa, toy ny 'supernova' (kintana mazava be), ohatra. Mifanaraka amin'io hevitra io ny voalaza ao amin'ny Ap5k. 21:23 hoe tsy ilaina any amin'ilay tanána any an-danitra ny masoandro satria eo Andriamanitra. Zavatra faharoa azo heverina fa nitranga ny hoe tamin'io fotoana io no notendrena hanatanteraka ny andraikiny ny masoandro sy ny volana ary ny kintana. Toa mifanaraka amin'io fomba fijery io ny Sal. 8:3. I C. John Collins, manam-pahaizana hebreo, dia nanoratra hoe samy azo raisina avokoa ireo trangan-javatra roa ireo, raha ny fanambarana ao amin'ny Gen. 1:14 amin'ny teny hebreo no dinihina. (Jer. ny Gen. 1-4: A Linguistic, Literary, and Theological Commentary, nosoratan'i C. John Collins, [Phillipsburg, New Jersey: P&R Publishing Co., 2006], t. 57.)
Zavatra fahatelo azo heverina fa nitranga ny hoe efa nisy ny masoandro saingy takon-drahona na takon'ny setroky ny vqlkano ('volcan') ka tsy hita na tsy afa-niasa tamin'ny fahafenoany hatramin'ny andro fahefatra. Azo ampitahaina amin'ny zava-mitranga ankehitriny ao amin'ny planeta 'Vénus', izay mitovy amin'izany, io toe-javatra fahatelo heverina fa nety ho nitranga io.
Toa tsy fantatra mazava hoe manohana sa mitsipaka ireo fanazavana ireo - na ilay fanazavana iza na ilay fanazavana iza - io andininy io, kanefa izany tsy misakana ny olona tsy haneho hevitra mafonja mikasika io loha hevitra io. Fitsipika tsara angamba ny tsy manome heviny ny resaka iray mihoatra noho izay hevitra omen'ny Baiboly azy, sady tokony hiaiky koa isika fa voafetra ny fahalalantsika. Tsy tokony ho sarotra ny manao io fiaikena io, indrindra eo amin'ny sehatry ny famoronana. Eritrereto tokoa hoe firifiry akory ireo zava-miafina amin'ny siansa amin'izao fotoana izao; izany hoe ireo azon'ny siansa dinihina amin'ny alalan'ny fanandramana ataony, kanefa dia mbola mitoetra ho zava-miafina ihany izy ireo. Tsy vao mainka aza ve saro-pantarina mihoatra noho ireo ny zavatra niafina hatry ny taloha ela be tany?